नि:शुल्क महिला उद्यमशिलता तालिम खुल्यो, छिट्टो फोन लगाउनुहोस्!
मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ४ को लागत साझेदारी र एकल एकता सेवा केन्द्रको आयोजनामा महिला उद्यमशिलता तालिम संचालन हुने भएको छ। तालिम लिन इच्छुक महिलाहरूले दिइएको सम्पर्क नम्बरमा यही मिति २०७६/०१/२७ गते भित्र सम्पर्क गर्नुपर्ने छ।
कसले लिन पाउँछन्?
यो तालिम इच्छुक महिला उद्यमीहरूले लिन पाउँछन्।
तालिम कहाँ हुनेछ?
तालिम भक्तपूरको सुँगा टोलको बाल प्रेमी माध्यमिक विद्यालयमा हुनेछ।
कहिले देखि कहिले सम्म हुन्छ?
तालिम यहि मिति २०७६ साल बैशाख २९ गते देखि जेष्ठ ४ गते सम्म हुनेछ।
कसलाई प्रतामिकता दिइनेछ?
सामान्य साक्षर तथा हिसाब गर्न सक्ने सानो व्यवसायमा संलग्नता भएका महिलाहरूलाई
ऋतु श्रेष्ठ: ९८४१०९६३८१